HUAJING sịntetik mica usoro ngwaahịa nakweere ụkpụrụ nke agbaze crystallization na elu okpomọkụ. Dika ihe eji eme ihe nke mica na ihe di n'ime ya, emeputara ya mgbe ikpo oku ma kpochapu ya na oke oku, obi uto na nkpuchi, mgbe ahu enwere ike inweta mica synthetic.
Rubber mezuwo Mica ntụ ntụ
Ihe Agba Whiteness (Lablọ nyocha) Urughuru nha D90 (μm) Ihe mkpuchi Ọcha (%) Ihe Magnetik (ppm) Okpokoro （%） LOI (650 ℃) PH Rịba ama
HCD-200 Na-acha ọcha 96 60 Oke elu ＞ 99.9 ＜ 50 ＜ 0,5 ＜ 0.1 7.6 Nnukwu mkpuchi arụmọrụ
HCD-400 Na-acha ọcha 96 48 Oke elu ＞ 99.9 ＜ 50 ＜ 0,5 ＜ 0.1 7.6
HCW-200 Na-egbuke egbuke White 98 65 Oke elu ＞ 99.9 ＜ 20 ＜ 0,5 ＜ 0.1 7.6 High-ọgwụgwụ Insulative ngwaahịa
HCW-400 Na-egbuke egbuke White 98 50 Oke elu ＞ 99.9 ＜ 20 ＜ 0,5 ＜ 0.1 7.6
HCW-600 Na-egbuke egbuke White 98 25 Oke elu ＞ 99.9 ＜ 20 ＜ 0,5 ＜ 0.1 7.6
HCW-1250 Na-egbuke egbuke White 98 15 Oke elu ＞ 99.9 ＜ 20 ＜ 0,5 ＜ 0.1 7.6
Na ngwa nke roba, mica kachasị na-eji ohere akụkụ abụọ nke mica n'onwe ya, nke na-enye nsonaazụ nkwado dị mma maka ngwaahịa roba. Ngwongwo mkpuchi ihe okike dị mma, nye ezigbo arụmọrụ mkpuchi eletrik maka akwa mkpuchi mkpuchi dị elu. N'iji ihe mgbochi mgbochi nke mpempe akwụkwọ mica, ọ na-eme ka ikuku ikuku dịkwuo elu; O nwere ike iji dochie silica, ihe na-enye otu ihe ngwọta akụ na ụba maka ihe ndị mejupụtara roba; Ezigbo nguzobe ịkwa osisi na nkwụsị abrasion, na-eme ka nguzogide abrasion na-adịgide adịgide nke nnukwu abrasion na-eguzogide ọgwụ. Ezigbo na magburu onwe interface mmetụta na-enye ezi iche àgwà maka Ebu.
Isi Ngwongwo Ngwongwo di iche iche na Mica Syntetik na Mica
1. Mica Syntetik anaghị enwe hydroxyl (OH) -, na nguzogide okpomọkụ ya na nkwụsi ike ya dị elu karịa nke mica nkịtị, na ọnọdụ ọrụ ọrụ gbasara 1100 ℃. Igwe ahụ na-agbanwe nwayọọ nwayọọ karịa 1200 ℃, na agbaze okpomọkụ nke fluorophlogopite bụ ihe dịka 1375 ± 5 ℃. Ọnụọgụ kachasị dị elu nke ikuku mica: Muscovite 550 ℃; Muscovite 800 ℃ (eke Muscovite malitere ire ere na 450 ℃ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na 900 ℃; Muscovite malitere ire ere na 750 ℃, na-enwe nnukwu mbibi karịa 900 ℃). Enwere ike ịkọwapụta ụdị Mica site na ikpo ọkụ ọkụ ma ọ bụ nyocha ọkụ dị iche iche.
2. Mica sịntetik nwere adịghị ọcha na ezigbo nghọta. Ewezuga na ike ya dị ntakịrị karịa nke mica nkịtị, ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ n'ọkụ, mkpuchi eletriki na mkpuchi ihe na-adịghị mma nke mica synthetic ka mma karịa nke mica. Sịntetik mica nwere ike kpamkpam dochie eke mica na bụ ụdị ọhụrụ nke elu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ insulating ihe pụrụ iche na magburu onwe Njirimara.
Nke gara aga: Eke mica ntụ ntụ